Wall Walled Mountin Basin Faucet White
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ဖုံးကွယ်ထားသော Wall-Mount Sink Faucets / တံတိုင်းတပ်ဆင်ထားဝှမ်း Faucet ဖြူ
1. ဖုံးကွယ်ထားသော faucet：အအေးနှင့်ပူသောနံရံဝှမ်းရေကန်တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်း၊
2. စကင်ဒီနေးရိုးရှင်း： လိုင်းတိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးစတိုင်ကျသောခေတ်မီဗေဒဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည်
၃။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလက်ကိုင် လက်ကိုင်သည် ergonomics နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ချုပ်ကိုင်ထားမှုကသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး switch သည်ချောမွေ့။ အခမဲ့ဖြစ်သည်
ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရေမြှုပ် ပိုမိုသင့်လျော်သောထုပ်ပိုးခြင်း၊ စတိုင်ကျလှပလှပသည့်အပြင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ရန်လွယ်ကူသည်
၄.၃၀ ရက်အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်ငွေ GU အာမခံချက်：ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနောက်ကွယ်တွင်ရပ်တည်နေသည်။ မီးဖိုချောင်တွင်ပါရှိသော faucets များအားလုံးကို ၃ နှစ်ကန့်သတ်ချက်၊ ၃၀ ရက်လီမိတက်ပြန်လာခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည်။ အကယ်၍ မေးခွန်းရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်မီဖြေရှင်းနိုင်သည်
SKU: 7613A0LW Categories: ဖုံးကွယ်ထားသော Wall-Mount Sink Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets Tags: အိမ်သာ faucet, လူပျိုလက်ကိုင်, လူပျိုလီဗာ
26 × 21 စင်တီမီတာ× 13
ကျယ်ပြန့်သော 2-Handle High-Arc ရေချိုးခန်း Faucet Ch ...
WOWOW 8 In ။ ကျယ်ပြန့်သော2လက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucet ...
WOWOW Matte Black နှစ်လက်ကိုင်ကျယ်ပြန့်သော Bathroo ...
Cube Matte က Black Basin ရောနှောထိပုတ်ပါ